Colaadii Woyanuhu kadhex abuuray 2-da Hawaarin oo meel xun maraysa. | ogaden24
Colaadii Woyanuhu kadhex abuuray 2-da Hawaarin oo meel xun maraysa.
Wararka ka imaanaya wadanka Ogaadeenya ayaa sheegaya in Colaadii ay kooxda PLF ee Tigreegu u Abuurtay Maleeshiyaadka ay ku Adeegato ee Hawaarinada ee Soomaalida Iyo Oromadu uu meel xun marayo.
Todobaadkan aan soo dhaafnay waxaa labadaasi Maleeshiyaad ee Hawaarinta labada dhinac dhexmaray Dagaalo dhawr ah oo meelo kala duwan ku dhexmaray waxaana dagaaladaasi ku kala gaadhay Khasaarooyin kala duwan oo dhimasho & dhaawac ba leh.
Hadaba sida ay Warbaahinta Qorahay Media warkan ku heshay 7-dii Bishan Janaury-2017 Deegaanka Gursum dagaal aad u culus oo khasaar badan dhaliyay ayaa kudhexmaray labada Maleeshiyaad ee Soomaalida Iyo Oromada kasoo kala jeeda ee Hawaarinada.
11-13-kii Bishan Janaury-2017 Deegaan katirsan Degmada Salaxaad ee Gobolka Nogob waxaa sidoo kale ku dhexmaray Dagaal xoogan oo sida la sheegayo ay laba jeer isku noqdeen, waloow aanaan khasaaraha ka dhashay helin.
Isla taariikhdaasi Meesha lagu magacaabo Raaso deegaan ka tirsan dagaal kale ayaa labadan Kooxood ku dhexmaray waxaana dhanka Hawaarinta Soomaalida dagaalkaasi kaga dhintay 5 qof 8 kalana way kaga dhaawacmeen sida aan xogta dagaalkan ku hellay balse ma aanaan helin tirada Kooxda dhanka Oromada ka dhimatay inkasta oo ay wararku sheegayaan in Khasaare badan laftooda uu dagaalkaasi ka gaadhay.
Maalintii taas ka dambaysay ee 12-Jan-2017 Muli oo Baabili u dhaw dagaal kale oo culus ayaa ku dhexmaray labadan Hawaarin, isla maalintaas Koore oo isna Baabili ka tirsan dagaal kale ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay kaas oo labadan Kooxood uun u dhaxeeya.
Xukuumadda Gabbalkeedu sii dumayo ee TPLF ee ay Tigreegu hormuudka ka yahiin ayaa Colaaddan u abuurtay labadan Kooxood ee Soomaalida Iyo Oromada kasoo kala jeeda waxayna ugu talo gashay inay labo labo isugu mashquuliso Qoomiyadaha Baraarugay ee Kacdoonadan xoogan kala soo horjeeda una guntaday sidii ay Afka ciidda ugu dari lahaayeen Xukunka Dhiigyacabka ah ee Addis Ababa si ay usii cimri dheeraysato.